သူကြီး အမှာစကားနဲ့ ဖွင့်လိုက်တဲ့ ကဗျာပြခန်း (၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » သူကြီး အမှာစကားနဲ့ ဖွင့်လိုက်တဲ့ ကဗျာပြခန်း (၄)
သူကြီး အမှာစကားနဲ့ ဖွင့်လိုက်တဲ့ ကဗျာပြခန်း (၄)
ကဗျာပြခန်း ( ၁) – http://myanmargazette.net/176843
ကဗျာပြခန်း ( ၂) – http://myanmargazette.net/177632
ကဗျာပြခန်း ( ၃) – http://myanmargazette.net/178437
ကဗျာပြခန်းအကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ – http://myanmargazette.net/178698
“မန်းဂဇက်ကဗျာချစ်သူများရဲ့ ကဗျာပြခန်း (၄) ဖွင့်ပွဲ”
ဖွင့်ပွဲနေ့ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ရွာလုံး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်နေကြသည်။ အနည်းငယ်ထူးခြားချက်ကား ရပ်ဝေးရောက်နေ့ ရွာသူားများပါ ပြန်ရောက်နေကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လထဲတွင် ကျင်းပမည့် ရွာတွေ့ဆုံပွဲအတွက် ပြန်လာကြခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် လူစုံတက်စုံတက်ရောက်မည့် ကဗျာပြခန်း (၄) ၏ ဖွင့်ပွဲကား အနည်းငယ် ပို၍စည်ကားနေသယောင် ရှိလေသည်။
ကဗျာပြခန်း (၄) ၏ ဖွင့်ပွဲကို ယခင်ပြခန်းများနည်းတူ ရွာထိပ်မှ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပရန် ပြင်ဆင်ထားသည်။ ထိုသို့ ပြခန်းနေရာယူထားမှုကြောင့် ရွာအစည်းအဝေး များကို ရွာလယ်ဓမ္မာရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ ကျင်းပရသည့်အတွက် ကဗျာချစ်သူများအဖွဲ့မှ အနည်းငယ်အားနာမိပါသည်။ ပြခန်းဘေးရှိ မြေကွက်လပ်တွင်လည်း ဖျော်ဖြေရေးစင်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ထားသည်။ ဖျော်ဖြေရေး စင်မြင့်၏ ရှေ့တွင်မူ ဆယ်ယောက်တစ်ဝိုင်းစာ စားပွဲဝိုင်းများကို ခင်းကျင်း ထားလေသည်။ ပြခန်းဖွင့်ပွဲတွင် အကျွေးအမွေး၊ ဖျော်ဖြေရေးများဖြင့် ဧည့်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြခန်းရှိရာ ဝန်း၏ အဝင်ဝတွင် မရွှေကြည်နှင့် ဗုံဗုံ တို့က ဝင်လာသမျှ ရွာသူားများကို ကြိုဆိုနေကြသည်။ ဝင်ပေါက်ရှိ တက်ရောက် မှတ်တမ်း လက်မှတ်ရေးထိုးရာ ခုံနေရာတွင် ရွာအပျိုချောများဖြစ်သော ပန်ပန်၊ ရေငါး တို့က နေရာယူထားသည်။ မှတ်တမ်းတင် လက်မှတ်ထိုးပြီးသူများကို ရွာလူကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးပီချိုကြီး က တွေ့ဆုံပွဲအကြိုအနေနှင့် လက်ဆောင်ပေးသော မန္တလေးဂဇက်လိုဂိုပါ ဘော့ပင်များကိုဝေလေသည်။ ဖတ်ရွေးလူကြီးများနှင့် သူကြီးအတွက် ဝိုင်းနှစ်ဝိုင်း သီးသန့်ဖယ်ထားသည်မှလွဲ၍ ရွာသူားများ အနေဖြင့် မိမိတို့ အဆင်ပြေသည့်နေရာတွင် ဝင်ထိုင်နိုင်ကြလေသည်။
ဝီရိယကောင်းလှသူ သူကြီးကား အစောကြီးကတည်းကပင် ရောက်နှင့်နေပြီ ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင် တစ်ယောက်တည်း ထိုင်ရင်း မိန့်မိန့်ကြီးပြုံးကာ တက်ရောက်လာသော ရွာသူားများအား ကြည့်ရှုနေလေ၏။ လူစုံတက်စုံဖြင့် စည်ကားလှသော ပြခန်းဖွင့်ပွဲသို့ စိတ်ဝင်တစားတက်ရောက်လာကြသော ရွာသူားများအား ကြည့်ကာ ပီတီပြုံးဖြင့်ပြုံးရင်း ပါးစပ်ကလည်း ခပ်တိုးတိုးရေရွတ်နေ၏။
“အင်း …. စနစ်ကြောင့်မဟုတ်.. စနစ်ကြောင့်မဟုတ်..”
မန်းဂဇက် ရွာသူားများကား “ဝင်လာမစဲ၊ တဖွဲဖွဲ” ဆိုသကဲ့သို့ ရောက်လာကြလေသည်။ လူကြီးများဖြစ်သော ဦးမိုက်၊ ဦးဘလက်၊ အဘဆွေ၊ ဦးဦးပါ၊ ဦးထူးဆန်း၊ လေးပေါက် တို့လည်း ရောက်ရှိလာကြ၏။ ကိုအာဂ နှင့် မနွယ်ပင်၊ ဆယ်အိမ်မှူးနှင့် ကတော်အုပ်၊ ကိုလု နှင့် မဒမ်လု၊ အိုဘားမားနှင့် မရို့စ်၊ ဒေါက်တာ နှင့် မအိတုံ တို့လည်း လူအမြင်မှာ တူနှစ်ကိုယ်ယှဉ်ကာဖြင့် ရွှေလက်တွဲလို့ ရောက်ရှိလာကြလေသည်။ ထို့နောက် ရွာလူပျို၊ အပျိုများကလည်း အချင်းချင်း စရင်းနောက်ရင်းဖြင့် အသီးသီးရောက်လာကြလေသည်။
လူစုံကာနီးအချိန်တွင် ပြခန်းဖွင့်ပွဲအတွင်း လှမ်းလင့်၍ ဝင်လာသူကား ….. ဟောင်ကောင်ပြန် ဦးလေးကျောက်။ သူကလည်း အားကျမခံ ရွှေလက်တွဲ၍ ပွဲတက်လာသည်။ သို့သော် ပွဲတက် လက်မှတ်ထိုးပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကြိုဆိုဧည့်ခံရေး ဗုံဗုံက အလှူရှင် ဦးလေးကျောက်ကို လူကြီးဝိုင်းသို့ နေရာချထားပေးပြီး ပါလာသူ မမလှလှကို သူတို့ထိုင်မည့်ဝိုင်းသို့ ဆွဲခေါ်သွားလေတော့သည်။ ထိုင်ကာနီးဆဲဆဲ ဦးလေးကျောက်မှာ ထိုင်ရမလို၊ လိုက်သွားရမလို ဖြစ်သွားသော်လည်း လူကြီးများရှေ့ဖြစ်သောကြောင့် အိန္ဒြေဆယ်ရင်း မချိပြုံးပြုံးကာ ဝင်ထိုင်လိုက်ရလေသည်။
ထိုင်လိုက်ချိန်တွင် ဦးလေးကျောက်၏ မျက်လုံးအစုံကား တစ်နေရာတွင် ရပ်တန့်သွားလေ၏။ မျက်စိရှေ့တွင် မြင်လိုက်ရသည်ကား ဦးကြောင်ကြီး။ ဦးကြောင်ကြီးနေရာက မမလှလှနှင့် မျက်စောင်းထိုး နေရာတွင် ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးကြောင်ကား ဦးခင်ခတို့ ဇနီးမောင်နှံ၊ ဦးဆာမိ၊ ကိုမတ်၊ ကိုဂီ၊ ဆြာအုပ်တို့နှင့် တစ်ဝိုင်းတည်းထိုင်ရင်း စကားလက်ဆုံကျနေ၏။ သို့ရာတွင် တစ်ချက်တစ်ချက် မမလှလှဘက်သို့ လှမ်းကြည့်နေသည်ကို ဦးကျောက်မြင်မိသော်လည်း မတတ်သာအခြေအနေမို့ ခပ်ခွာခွာကသာ သတိထားနေရလေတော့သည်။
ယင်းနောက် ထပ်မံရောက်ရှိလာသည်ကား အန်တီပဒုမ္မာနှင့် အန်တီမမတို့ အမွှာညီအစ်မအတွဲ၊ ဘေးတွင် အရီးလတ်။ ထူးခြားချက်ကား သူတို့လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော အလှူခံဖလားများပေတည်း။ ထို့နောက် တွေ့ရသည်ကား ဖွင့်ပွဲ အပေါက်ဝတွင် လက်မှတ်ထိုးနေသူ နှစ်ဦး။ ထိုနှစ်ဦးမှာ အဘဖော နှင့် ကိုရဲစည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် လမ်းတွင် တွေ့လာပြီး အတူဝင်လာခြင်း ဖြစ်ဟန်တူ၏။ အရီးတို့ ညီအစ်မအား ကြိုဆိုနေရာချပေးပြီး ပြန်ထွက်လာသော မရွှေကြည်မှာ အဘဖောတို့ကို နှုတ်ဆက်ရန် ဟန်ပြင်လိုက်သော်လည်း စကားကောင်းနေကြသဖြင့် မနှုတ်ဆက်ဖြစ်လိုက်ပါပေ။ အဘဖောနှင့် ကိုရဲစည်တို့ စကားပြောနေသည်ကို နားစွန်နားဖျား ကြားမိသည်ကား …..
“ဒါတွေကျတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ နည်းနည်းကွာတယ်.. ကိုရဲစည်ရဲ့…. ကျွန်တော်တို့ဩဇီ မှာကျတော့.. xxxxxxxxx xxxxxx ”
စကားကောင်းနေသော အဘဖောတို့ကို နှုတ်မဆက်ဖြစ်တော့သော်လည်း အဘဖောတို့ကတော့ အန်တီမမ တို့ဝိုင်းသို့ ဦးတည်သွားပြီဖြစ်သည်။
“မန်းကဇက်ကဗျာချစ်သူများရဲ့ ကဗျာပြခန်းဖွင့်ပွဲ စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်….”
ယင်းသို့ သာယာသောအသံဖြင့် စင်ပေါ်မှ ကိုယ်ထင်ပြလိုက်သူကား ပြခန်း (၄) ၏ ဖွင့်ပွဲ တာဝန်ခံ ရွာသူချော လုံမလေးမွန်မွန် ဖြစ်သည်။ (အဟိ)
ပြခန်းဖွင့်ပွဲကို အစီအစဉ် (၅) ခုနဲ့ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
အစီအစဉ် (၁) – ပြခန်းဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။
အစီအစဉ် (၂) – သူကြီးက အမှာစကား ပြောကြားခြင်း။
အစီအစဉ် (၃) – ပြခန်း (၃) ၏ မဲအရေအတွက်နှင့် မန်းဂဇက်ကဗျာချစ်သူများ၏ လူကြိုက်အများဆုံးကဗျာ ကို ကြေညာခြင်း။
အစီအစဉ် (၄) – ပြခန်း (၄) ၏ ကဗျာများနှင့် ကဗျာရေးသူများကို မိတ်ဆက်ခြင်း။
အစီအစဉ် (၅) – အခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဒါကြောင့် အခု အစီအစဉ် (၁) အရ …..
မန်းဂဇက်ကဗျာချစ်သူများရဲ့ ကဗျာပြခန်း (၄) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား စတင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်….
(ဖြောင်း….ဖြောင်း…ဖြောင်း… ရွှီး …..)
အစီအစဉ် (၂) အရ …..
ရွာသူကြီး ဦးခိုင်က အမှာစကားပြောကြားပေးပါရန် လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်….
ထိုသို့ ကြေညာသံ အဆုံးတွင် သူကြီးဦးခိုင်မှာ ခပ်တည်တည်ဖြင့် မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီးနောက် မိုက်ခွက်အား ဟန်ပါပါကိုင်ကာ ဤသို့ ပြောလေ၏။
“‘စာပေ-ဝတ္ထု၊ ရတု-ကဗျာ၊ ပျို့-လင်္ကာ နှင့်၊ သာသည်သီချင်း၊ အဲ-စောင်းညှင်းကို။ မကင်းမပြတ် ဖတ် ရွတ် လေ့ ကျက်၊ တီးမှုတ်လျက်သာ၊ နေကောင်းစွာ”
ဂီတဘိုးတော် ဝန်ကြီး ပဒေသရာဇာ မှာတမ်းထားခဲ့တယ်..
ဘုရားသခင်က.. အနုပညာပန်းဥယာဉ်ကြီးထဲမယ်.. အလှဆုံးပန်းလေးတပွင့်တပွင့်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုပါစို့…
ဆိုတော့… ဖတ်ကြ..ရွတ်ကြ.. လေ့ကျင့်ကျက်မှတ်ကြ…
သူကြီး၏ ဖွင့်ပွဲ အမှာစကားမှာ ကဗျာဖတ်ရန်၊ ရွတ်ရန် တိုက်တွန်းဖြင်းဖြင့် ပြီးဆုံးသွားလေသည်။
” ကဗျာရွတ်ခိုင်းသွားတဲ့ .. အဲ .. အမှာစကားပြောကြားပေးပါသော သူကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်….”
အခု အစီအစဉ် (၃) အရ …..
ပြခန်း (၃) ရဲ့ မဲအရေအတွက်နဲ့ မန်းဂဇက်ကဗျာချစ်သူများ၏ လူကြိုက်အများဆုံးကဗျာဆုကို ကြေညာမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။ ဒီဆုကို ကြေညာပေးဖို့အတွက် ကဗျာပြခန်း(၃) ရဲ့ ပြခန်းတာဝန်ခံ မခိုင်ဇာ ကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။
မြန်မာဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်လျက် စင်ပေါ်သို့ ကျက်သရေရှိစွာ လှမ်းတက်လာသူကား ခြင်္သေ့ကျွန်းမှ ပြန်ရောက်လာသူ မခိုင်ဇာ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ပရိသတ်ကို ပဟေဠိဆန်ဆန် ပြုံးပြရင်း ဆုကြေညာပေးလေသည်။
“ပြခန်း (၃) မှာ မဲစုစုပေါင်း (၁၃၁) မဲ ရှိတဲ့အနက် ( ၂၄ ) မဲ တစ်နည်းအားဖြင့် ဗုတ်ပေါင်း (၂၄) ခု နဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး ကဗျာဆုကို ရရှိသွားသူကတော့ … နာမည် တစ်လုံးတည်းပါတဲ့ …. ကဗျာဆရာ … …… …….”
“ဈာန် … ဈာန် … ဈာန် …” ( ပရိသတ်မှ လှမ်းအော်သံ…)
“ဟုတ်ပါတယ်ရှင်… “နှောင်ဖွဲ့မှုလွတ်ကင်းခြင်းကဗျာ” ကို ရေးစပ်သွားတဲ့ ကဗျာဆရာ “ဈာန်” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်… အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဈာန် ဆိုတဲ့ ကလောင်ရှင်ဟာ ရွာသားတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ဈာန် ဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ မှန်းကြည့်ကြပါဦးနော်… ဒါကို ဆုပေးပွဲနေ့မှပဲ အဖြေညှိကြတာပေါ့… အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်… ”
မခိုင်ဇာကတော့ ပဟေဠိတစ်ခုကို ထပ်ပေးသွားပြန်လေသည်။ ထို့နောက် လုံမလေးမွန်မွန်က ဆက်လက်ကြေညာပေးသည်။
ဆက်လက်ပြီး ပြခန်း (၃) ပါ ကဗျာများနဲ့အတူ ရေးစပ်သူ ကဗျာဆရာများကို ကြေညာပေးပါ့မယ်ရှင့် ….
♦♦♦ ခြေထောက်သုံးချောင်းနဲ့ လက်တစ်ချောင်းကို လိုချင်တယ်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဖော်ထုတ်ပြောကြားလာသူကတော့ လုံမအခေါ် အူးလေးဖြူကြမ်း (ဦးဘလက်ချော) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်… နားစွန်နားဖျား ကြားမိတာကတော့ တောင်းပေးတဲ့သူကို ချိုပေါ့ကျ တိုက်ပါမယ်တဲ့ရှင်…. (လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးအတွက် ကော်လီနာရဲ့ အနီကတ် – ဘလက်ချော)
♦♦♦ ပန်းခြောက်နဲ့ ပန်းသစ်ကြား ဒွိဟများနဲ့ မရေမရာဖြစ်နေသူကတော့ ကျွန်မဟာ…အဲ…စာလိုဆိုရင် ကျွန်မသည် လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးခွန်းထုတ်သူ…ခြင်္သေ့ကျွန်းက..မမခိုင်ဇာ…မဟုတ်ပါဘူး..မမခိုင်ဇာရဲ့ သူငယ်ချင်း ရွာသူ မနေခြည် ဖြစ်ပါတယ်..နှစ်ခြောက်ဆယ်ကျော်နေတဲ့ မြစ်တစ်ဆင်းကို ဆက်လက်ရှင်သန်စီးဆင်းစေချင်သူပါ…. (ကျမဟာ – နေခြည်)
♦♦♦ မမုန်းပါဘဲနဲ့ ကြည့်မရဖြစ်…မချစ်ပါဘဲနဲ့ လွမ်းနေရတဲ့အဖြစ်… သည်လို ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်တွေကြောင့် ဝဋ်ရှိသမျှ သည်ဘဝနဲ့ ကျေရပါစေလို့ ဆုတောင်းထားသူကတော့ ခြင်္သေ့ကျွန်းကနေ အိမ်ကို လွမ်းနေတဲ့ မမဂျီး ရွှေကြည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်…အခန်းနံပါတ် (402) ဆိုလားပဲ… (ဤသူ – ရွှေကြည်)
♦♦♦ ရသမြောက်လင်္ကာကို သွားရည်ယိုအောင် သရုပ်ဖော်ရေးဖွဲ့တဲ့သူကတော့ ရှိသမျှကဗျာတွေကို စားချင်တဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ လက်တမ်းကဗျာရေးရာမှာ အင်မတန်တော်တဲ့ … ဟိုကြပ် ဒီကြပ် လှည့်အူကြပ်… (အဲ..ကန်တော့…ဘွာတေး)…ဟိုလှည့်ဒီလှည့် ကြက်အူလှည့် အမည်တွင်သော အစ်ကိုကြီး အင်ဇာဂီပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်…. (ရသမြောက်အလင်္ကာ – အင်ဇာဂီ)
♦♦♦ အပြောင်းအလဲတွေကြားမှာ ဇီဇာကြောင်… (အဲ.မှားပြန်ပြီ.. ခွင့်လွှတ်ပေးပါကုန်…) အပြောင်းအလဲတွေကြားမှာ မပြောင်းလဲအောင် ဆုတောင်းပေးစေချင်တဲ့သူကတော့ (မျိုးကြီးလေသံဖြင့်) လုံမတို့ရွာရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး လူပျိုကြီး … ကိုအမတ်မင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်… (အပြောင်းအလဲ – အမတ်မင်း)
♦♦♦ နောင်ရိုးဆိုတဲ့မြေ ရယ်လို့ ဇာတိမြေအကြောင်းကို ဂုဏ်ယူစွာ ရေးဖွဲ့ထားသူကတော့ အိမ်မဲသား ကိုထက်ဝေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. (နောင်ရိုးဆိုတဲ့မြေ – ထက်ဝေး)
♦♦♦ ရေးနေကျ မော်ဒန်ကဗျာက ခွဲထွက်… ကာရန်စည်းမျဉ်းကြားမှာ .. ခင့်ကြောင့် ငိုပွဲနွှဲရပါတယ်လို့ ရင်ဖွင့်လာသူကတော့ … အလင်းတွေကို ဆက်ပေးချင်တဲ့ အလင်းဆက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. တစ်ရှူးတစ်ထုပ်လောက် လက်ဆောင်ပေးပါရစေ… (မျက်ရည်ပွဲ – အလင်းဆက်)
♦♦♦ ဝီနဲ့ ထွေထွေဖြစ်နေ… (မှားပြန်ပြီ).. ရီဝေဝေ အိပ်မက်တွေထဲက လန့်နိုးပြီး ခမ်းခြောက်ကြုံလှီနေတဲ့ဦးနှောက်နဲ့ လျှောက်လှမ်းဖို့ အလှည့်ကျစောင့်နေသူကတော့ လူတိုင်းရဲ့ချစ်ခြင်းကို ခံယူချင်တဲ့ ကိုရီး ကြောင်ဝတုတ်ပါရှင်…. (ဝေဒနာဆွေးချိန် – ကြောင်ဝတုတ်)
♦♦♦ အချစ်ဟာ အရိပ်ထက်ပိုတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့သူကတော့ မျက်နှာများတဲ့..အဲ..ပြန်ဖားထားမှ… မျက်နှာမများတဲ့ အံစာတုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်… အခုတော့ အဝတ်ဝတ်ထားပါတယ်… အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ထားတယ်လို့ ဆိုလို့ရမလားမသိ.. (အချစ်ရိပ် – အံစာတုံး)
♦♦♦ ရာသီစာပို့လာသူကတော့… (အဲ..မခိုင်ဇာနဲ့ ရောကုန်ပြီ..) ကျောင်းဖွင့်ချိန် ဇွန်လအကြောင်းကို သရုပ်ဖော်တဲ့သူကတော့ သရီးကေ (ခေါ်) လေးလေးခင်ခပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ရွာပြင်ဇနပုဒ် မီးမှိန်မှိန်လေးမှာ မဒမ်တစ်ယောက်တည်းတော့ ချန်မထားခဲ့ဘူး ထင်ပါတယ်နော်… (ဇွန်လရောက်ပြီမို့ – ခင်ခ)
♦♦♦ မဖြစ်နိုင်တဲ့ စွဲလန်းမှုရဲ့ နောက်မှာ မျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ အသက်ဆက်နေသူကတော့ နာမည်လှလှလေးနဲ့ မမေယွန်းအိမ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်… (မဖြစ်နိုင်တဲ့ စွဲလန်းမှု – မေယွန်းအိမ်)
♦♦♦ ဒုတိယနတ်ဘုရားရဲ့ ကျိန်စာကြောင့် သုံးဆယ့်တစ်ဘုံမှာ အလွမ်းဝေဒနာတွေကျန်ခဲ့ပါတယ်လို့ ရင်ဖွင့်ထားသူကတော့ ..မိုးကုပ်ကုပ်ဝယ်…အို ရုတ်တရပ်.မျဉ်းဖြူဆက်၍ … အဲ… ဒဂုန်တာရာရဲ့ ကဗျာနဲ့ ရောသွားလို့… ပတ္တမြားမြေက မိုးကုတ်သား ဖြစ်ပါတယ်ရှင်… (သုံးဆယ့်တစ်ဘုံအလွမ်း – မိုးကုတ်သား)
♦♦♦ ကိုယ့်အချစ်ကို ယုံကြည်စွာနဲ့ အနူးညံ့ဆုံးတိုက်ပွဲအတွက် စတင်ကမ်းလှမ်းသူကတော့ ..မိဆု ပါတဲ့… (အနူးညံ့ဆုံးတိုက်ပွဲအတွက် ကမ်းလှမ်းချက် – မိဆု )
ဟုတ်ကဲ့…။ လုံမ ကြေညာချက်တွေထဲမှာ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရှင့်.. ….။ အားလုံးပဲ လုံမအကြောင်းကို မပြောကြပါနဲ့နော် … “Please…Don’t …” ….
အခု အစီအစဉ် (၄) အရ …..
ပြခန်း (၄) မှာ ပါဝင်တဲ့ ကဗျာတွေအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်…. ပြခန်း (၄) မှာ ကဗျာ (၁၆) ပုဒ်နဲ့ ဖွင့်လှစ်ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဖွင့်မှာတော့ ကဗျာဆရာ မောင်စိမ်းနီ (ကေသီပန်) ရဲ့ “ကဗျာစစ်မျက်နှာ” ဆိုတဲ့ ကဗျာနဲ့ စတင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ တော်လှန်ကဗျာ ဆိုတဲ့ ကဗျာစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ကဗျာဆရာ (၁၀) ဦးရဲ့ ကဗျာပေါင်း (၇၇) ပုဒ် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီကဗျာတွေထဲကမှ “ကဗျာစစ်မျက်နှာ” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ စနစ်တစ်ခု၊ ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ ကဗျာကို အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာကတော့ “စာဖတ်တတ်သူအားလုံး ဖတ်ဖို့၊ စာမဖတ်တတ်သူအားလုံး ကြားဖို့ မြင်သလို၊ သိသလို အရင်းအတိုင်း ရေးသည်” လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက် ဒီစာအုပ်ထဲမှာ အမှာစာနှစ်စောင် ပါပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာရဲ့ အမှာစာကို ပြခန်း (၄) ကစပြီး အပိုင်းခွဲ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ ရွာသူား (၁၃) ယောက်ရဲ့ ကဗျာ (၁၃) ပုဒ်ကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာရှင်တွေကတော့ “ထက်ဝေး၊ နန်းရှင်၊ နေဝန်းနီ၊ ק@!ИҀ၊ ဦးကြိမ်၊ သော်ဇင် (လွိုင်ကော်)၊ Green Rose၊ တောကကိုရင်၊ တောတွင်းပျော်၊ သူကလေး၊ လူကလေး၊ လူစိုး နဲ့ နေခြည်” တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် လုံမရဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုဝေး (ဒေးဒရဲ) ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “ဘာလဲ” ဆိုတဲ့ ကဗျာနဲ့ အလင်းဆက်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Nora ရဲ့ “မရေရာခြင်း” ဆိုတဲ့ ကဗျာတွေလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် အားလုံးပဲ လုံမတို့ရဲ့ ကဗျာပြခန်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခံစားပြီး ပြခန်း အပြန်မှာ မှတ်ချက်လေးတွေ ပေးသွားကြပါဦးလို့ …..။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
အခု အစီအစဉ် (၅) အရ …..
မန်းဂဇက်ကဗျာချစ်သူများရဲ့ ကဗျာပြခန်း (၄) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်။
အခု ဆက်လက်ပြီး အကျွေးအမွေး နဲ့ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ် စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
အန်တီမမ ရဲ့ သုံးရောင်ခြယ်ထမင်းကြော်
မရွှေတုတ် ရဲ့ ကြက်သားကြော်
ဆယ်အိမ်မှူးဇနီးမောင်နှံ ရဲ့ ကြက်သားခနုံထုပ်
မခိုင်ဇာ ရဲ့ ဆယ်လမွန်ငါး ချဉ်စပ်ဟင်းရည်
အန်တီအိ ရဲ့ သရက်သီးကိတ် နဲ့ အာလူးဥနီပူတင်း
အန်တီဝေ ရဲ့ ဒူးရင်းရွှေကြည်ဆနွင်းမကင်း
ကဗျာအဖွဲ့သားများ ရဲ့ ကော်ဖီ
တို့ကို အားပါးတရ သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ သုံးဆောင်နေချိန်အတွင်းမှာ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်ကတော့ မဟာရာဇာအံစာတုံး နဲ့ ဦးမာဃ တို့ရဲ့ “ဦးစိတ်တိုနဲ့မျောက်ညို သရုပ်ဖော်အော်ပရာ”၊ အလင်းဆက် ရဲ့” နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်အက”၊ ရွာသူ သူကလေး ကိုယ်တိုင် သီဆိုဖျော်ဖြေမယ့် “နားပန်းဆံအက”၊ သာလှကတော့ ကိုရင်မိုဘိုင်း ပါ။ နောက် ဦးရွှေရိုး-လူကလေး၊ ဒေါ်မိုး-မိုးမင်းသား တို့ရဲ့ ဦးရွှေရိုး-ဒေါ်မိုး အကအလှကို ဆက်လက်ရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေရေးကို ပျော်ရွှင်စွာခံစားပြီးရင်တော့ ……
ကဗျာပြခန်းထဲကို ဝင်ရောက်အားပေးပြီး အပြန်မှာ မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့အတူ ပြခန်း ကဗျာတွေထဲကမှ အကြိုက်ဆုံး၊ အနှစ်သက်ဆုံး ဖြစ်မယ့် ကဗျာ (၃) ပုဒ်ကို မဲပေးခဲ့ကြပါဦးလို့ ထပ်မံပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။
(ဗုတ်တဲ့အခါ သုံးပုဒ်စလုံးကို တစ်ခါတည်း အမှတ်ကလေးတွေ ခြစ်ပြီး ဗုတ်ကြပါနော်။ တစ်ပုဒ်ခြစ်ပြီး ဗုတ်လိုက်၊ နောက်တစ်ပုဒ်ခြစ်ပြီး ဗုတ်လိုက် လုပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါဗုတ်တာပဲ ရနိုင်မှာမို့ပါ။)
=> ကဗျာပြခန်း (၄) သို့သွားရန် <=
အခုလည်​း ကျမရဲ့ည ဆို​တော့ ကျမမူပိုင်​ရှင်​မ​နေခြည်​များဖြစ်​​နေမလားပဲ
ဒီလိုသာဆိုရင်​ …… ကဗျာကိစ္စအားလုံး အရွတ်​အဖတ်​အပါအဝင်​ အလင်​းဆက်​ပဲတာဝန်​ယူရ​တော့မှာ​ပေါ့
လေးလေး ဆာ က တော့
မ ပြီ ။
မလွဲ မရှောင် သာလို့ကဗျာ ရွတ် ပြရမယ် ဆိုရင်တော့
နှာကျိုး သံလေး နဲ့ ပဲ ရွတ်ပြပါ့မယ် ။
သဘောတူပါသလား ကဗျာ ပိုင်ရှင်များးး